प्लास्टिक जलाउने गर्नुभएको छ ? होशियार !
काठमाडौं । प्रायले आफूले प्रयोग गरेका प्लास्टिक जम्मा पारेर जलाउँछन् । तरअधिकाँशलाई थाहा नहुनसक्छ, प्लास्ष्टिक जलाउँदा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर समस्या निम्तिन सक्छन् । भर्खरै गरिएको एक अनुसन्धानले प्लास्टिक
‘आफ्नो देश पनि त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ’
काठमाडौं । कथाकार तथा नियात्राकार इल्या भट्टराईको नियात्रा संग्रह ‘दक्षिणायन’ प्रकाशित भएको छ । संग्रहमा नियात्राकारले कला, प्रकृति, समाज र इतिहासको चर्चा गर्नुभएको छ । जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘किताबका कुरा’
अछाम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३२ स्थानमा खेलमैदान निर्माण तथा सुधार गरिने भएको छ । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका ३२ वटै स्थानमा खेलमैदान निर्माण एवं सुधार गरिने भएको हो । प्रदेशको सामाजिक
पत्रपत्रिकामा आजः सैनिक कानुन, सेनापतिले मात्र जानून्
काठमाडौं । सोमबार प्रकाशित पत्रपत्रिकाले फरक–फरक विषयका समाचारलाई आ–आफ्नो प्राथमिकताअनुसार छापेका छन् । ‘नेपालमा लगानी गरे दोहोरो फाइदा’ शीर्षकको समाचारलाई कान्तिपुरले मुखपृष्ठमा छापेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल
पर्वत । प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थलको रूपमा चिनिएको मोदीवेणीधामबाट शनिबार राति शालिग्राम चोरी भएका छन् । मोदीवेणीधामस्थित नृसिंह मन्दिरमा रहेका झण्डै ५० शालिग्राममध्ये ४७ वटा चोरी भएको नृसिंह मन्दिर धार्मिक
मुस्लिम धार्मिक सम्मेलन चल्दै, विद्यार्थीलाई ‘इस्लामिक’ उपाधि दिइने
बाँके । दाउते इस्लामी नेपालको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुस्लिम धार्मिक प्रवचन नेपालगन्जमा चलिरहेको छ । पाकिस्तानबाट आउनुभएका दाउते इस्लामीका केन्द्रीय अध्यक्ष हाजी मौलाना इमरान अत्तारीले शनिबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ
उद्घाटनको दोस्रो दिनमै बिग्रियो ‘द्रूत रेल’
काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार झण्डा हल्लाएर उद्घाटन गरेको ‘द्रूत रेल’ दोस्रो दिनमै बिग्रिएको छ । भारतको सबैभन्दा द्रूत गतिको भनिएको रेल ‘बन्दे भारत’ बनारसबाट राजधानी दिल्ली फर्कंदै
अमिताभको घोषणाः कश्मीर हमलामा मारिएका परिवारलाई २ करोड
एजेन्सी । बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनले कश्मीर हमलामा मारिएका सैनिक जवानका परिवारलाई २ करोड २५ लाख सहयोगको घोषणा गरेका छन् । अमिताभको घोषणाअनुसार सो हमलामा मारिएका प्रत्येक सैनिक परिवारलाई पाँच
आजकाे माैसमः यी ठाउँमा मेघ गर्जनसहित वर्षा
काठमाडौं । आइतबारदेखि मुलुकका धेरैजसो स्थानमा मौसममा सुधार आउने भए पनि केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज उपत्यकासहित केही स्थानमा मौसममा सुधार हुनेछ भने
१२ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन
बैतडी । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सम्बन्धित गाउँसभा तथा नगरसभाबाट
ट्रिपरको ठक्करबाट पत्रकार गेलाङ्गको मृत्यु
यी ११ कारण गुठी ऐन जनविरोधी र देशघाती